Ny App Store dia mandray am-pomba ofisialy ny tolo-kevitry ny fikarohana any Etazonia sy Kanada | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 30/04/2021 16:00 | App store, About us
Ny betas an'ny iOS 14.5 Naneho fiasa vaovao maro izy ireo izay azontsika atao izao amin'ny andiany farany. Na izany aza, miafina ny fiasa hafa ary hiezaka ny hampandeha azy ireo amin'ny telefaona i Apple rehefa heveriny fa mety. Iray amin'ireo fiasa ireo ny Soso-kevitra fikarohana amin'ny App Store, fomba iray mahomby hitarihana ny fikarohanao ny rindranasa sy ny atiny ao amin'ny magazay fampiharana paoma lehibe. Ora vitsy lasa izay, nanangana hevitra momba ny fikarohana tamin'ny fomba ofisialy any Etazonia, Kanada, Angletera ary Aostralia.
Ny soso-kevitry ny fikarohana dia eto hijanona ao amin'ny App Store
Safidio (na esorina ny safidinao) avy amin'ny tolo-kevitra maro hanadio ny fikarohanao hahafahanao mahita fampiharana sy lalao mahatalanjona kokoa.
Tamin'ny alàlan'ny kaonty ofisialin'ny App Store ao amin'ny Twitter, Apple dia nanambara ny fahatongavan'ny tolo-kevitra fikarohana ao amin'ny mpitady fampiharana anao. Izy io dia endri-javatra izay efa azo alaina ao amin'ny iOS 14.5 betas farany ho an'ny mpampiasa sasany. Saingy, ao amin'ny kinova farany dia tsy nahita fampahavitrihana ankapobeny ny fitaovana izahay.
Izany dia vokatry ny Any Etazonia, Kanada, UK ary Kanada no misy azy io. Ireto firenena efatra ireto dia ho mpanapa-kevitra beta momba ny lahasa iray ahafahan'ny mpampiasa mizaha fikarohana. Ohatra, hametraka "sary" isika ary ny App Store dia hanome soso-kevitra tag toy ny "collage", "editor", "video", sns. Vitantsika izany mifidy tag iray na maromaro ary haseho antsika ny valiny samihafa izay mifanaraka amin'ny karoka marina.
🗣 Mampahafantatra soso-kevitra amin'ny fikarohana ao amin'ny App Store!
Safidio (na esorina) ny tolo-kevitra marobe hanadiovana ny fikarohana nataonao mba hahafahanao mahita fampiharana sy lalao mahavariana kokoa.
Mihodina anio ny tolo-kevitry ny fikarohana manomboka amin'ny USA, Canada, UK, ary Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb
- App Store (@AppStore) Aprily 29, 2021
Azo inoana fa amin'ny volana ho avy ity asa ity dia hahatratra ny firenena rehetra manerantany. Mandritra izany fotoana izany, afaka manavao ny fitaovantsika amin'ny iOS 14.5 izahay ary hankafy ny vaovao rehetra tafiditra ao, toy ny mety hamoha ny iPhone noho ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ny App Store dia mandray am-pomba ofisialy ny soso-kevitry ny fikarohana any Etazonia sy Kanada
Efa misy horonantsary miseho miaraka amin'ny fanaparitahana voalohany ny AirTag